Lisea Ranohavimanana Norbert Tombontsoan’ny mpianatra no jerena, hoy ny minisitera
Ministeran` ny fanabeazam-pirenena Rahoviana vao ho voavaha ny olana ?
Raha ny fahaizana sy fananana diplaoma be dia azo lazaina fa ity governemanta ity no manam-pahaizana.
Betsaka ny pitsopitsony tsy maintsy arahina raha hanova olona iray eo amin’ny fitantanan-draharaha, hoy Atoa Sandro tale misahana ny maha olona eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena.
Nomarihany fa voavaha ny olana rehefa misy ny fifampidinihana teo amin’ireo mpanabe sy ny Proviseur vaovao. Tsy nahafapo tanteraka ny fanapahan-kevitra saingy ny hoavin’ny ankizy no banjinina aloha, hoy izy. Misy amin’ireo mpanabe hatreto no tsy resy lahatra amin’ny fisian’ilay Proviseur vaovao. Raha nanontaniana mahakasika izay ny tenany dia nilaza fa ny hevitra no miady fa tsy ny olona ka rehefa misy ny marimaritra iraisana dia tanterahana ny adidy amin’ny fanasoavana ny zana-bahoaka.
Légende:Ireo iraky ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena tonga nandamina tany Ambatondrazaka